Fanelanelanana Crédit Lyonnais: fanokafana ny fotoam-pitsarana ny Bernard Tapie 'scam' - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Fanelanelanana Crédit Lyonnais: fanokafana ny fotoam-pitsarana ny Bernard Tapie 'scam'
Ny minisitra teo aloha Bernard Tapie efa nanomboka, ny alatsinainy, martsa, mba ho tsaraina mialoha ny piarenana fitsarana Paris amin'ny dimy hafa voampanga ho 'scam' ny olana ny mpanelanelana hosoka tamin'ny, izay efa nanome tapitrisa euros mba handaminana ny ady amin'ny Crédit LyonnaisKoa henjehana ho an 'ny fanodinkodinana ny volam-bahoaka', izy no mendrika ny ho fito taona an-tranomaizina sy euro tsara. Nalemy noho ny homamiadan'ny vavony, Bernard Tapie, taona ny taona, dia tsy tsy dia 'tapa-kevitra' mba hanehoana fa tsy 'nandroba ny mpandoa hetra', ary mampanantena fa hamaly bontana ny fiampangana azy, izay nolaviny amin-kafanam-po.
Ny fitsarana, izay ny andro voalohany dia natokana ho olana ny fomba, ny fotoana ny angady voalohany teo amin'ny dabilio ny fiarovana sy ny sivily, antoko, amin'ny tsy hitovy hevitra, tsy maintsy hatao mandra- aprily.
Miseho eo anilany, ny mpisolo vava azy taloha Maurice Lantourne, iray amin'ireo arbitrators telo izay natolony ny loka toy ny hosoka, Pierre Estoup, ny lehibeny Orange Stephane Richard, talen'ny kabinetran'ny minisitry ny toe-Karena Christine Lagarde ny ny fotoana ny zava-misy, ary ny roa teo aloha, mpitarika ny vondrona tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny lafy ratsiny ny Crédit Lyonnais, Jean-François Rocchi, ary Bernard Scemama. Izy dia voampanga ho manana nikarakara na efa ho mpiray tsikombakomba 'scam', ny alalan ny fanelanelanana izay fantany ho hankasitrahany ny lehibeny teo aloha ny Adidas. Rehefa notsipahiny ny anarana fangatahana nataon ny liquidators ny Bernard Tapie, manokana bankirompitra hatramin'ny desambra, ny fitsarana dia nandinika ny fangatahana ny fanambarana ny invalidity. Ny mpisolovava ny Bernard Tapie sy Maurice Lantourne mangataka ny fanafoanana ny mba ho momba, ny antony fa ny mpanjifa no ho henjehina noho ny asa izay tsy mbola voaheloka. Ny tribonaly dia hamoaka ny fanapahan-kevitra momba ny resumption ny fakàna am-bavany, ny talata teo, teo amin'ny. Izany dia lazaina fa ny filoha teo aloha ny OM ho omena ny na ny mpisolovava 'hazolena' ny mpizara Pierre Estoup, fa ho 'an-jorom-bala' ny roa hafa mpikambana ao amin'ny arbitral tribonaly, ny teo aloha lehibe ny feon ny fisotroana Jean-Denis Bredin sy ny filoha teo aloha ny momba ny lalàm-panorenana Filankevi-Pierre Mazeaud, mba hanapa-kevitra ao izay mahasoa ny raharaham-barotra ny olona. Bernard Tapie dia mino ihany koa ny nametraka tsindry eo amin'ny fanohanana ny Elysée mba hahazo ny fanelanelanana, na dia teo aza ny fankahalana ny vahoaka fametrahan-tanana nanaiky ny fitsarana ny fanapahan-kevitra mahazatra. Raha vao ny mari-pankasitrahana efa natao, izy dia nanao ny zava-drehetra Bercy izay tsy antso Ity ny tsy fisian'ny asa nitarika Christine Lagarde, amin'ny faran'ny taona, mba ho meloka 'ny tsy fitandremana', raha ho afa-miala amin'ny fanamelohana. Notanisain'ny Bernard Tapie, ny mpampiasa ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) dia tsy, na izany aza, Paris 'nomena azy malalaka', hoy ny filohan'ny fitsarana. Ny fomba ny mpanelanelana, tsy miankina ponenana efa nanapa-kevitra ny fotoana fohy taorian'ny fifidianana Nicolas Sarkozy tamin'ny taona, mba hamarana ny taloha fifandirana eo Bernard Tapie sy ny Crédit Lyonnais, teraka ny resale tamin'ny taona ny zavatra vondrona Adidas. Ny arbitral mari-pankasitrahana efa navoaka ny volana jolay, mihoatra noho ny tapitrisa euros ny minisitry ny Tanàna François Mitterrand, izay tapitrisa ny 'fitondran-tena manimba'. Ity loka ity dia ny hanafoanana ao an-trano, Bernard Tapie dia voasazy handoa ny vola voaray, izy ireo ihany koa ny fanamby. Ho an'ny tompon-trosa, ny trosa ankehitriny dia be, miaraka amin'ny tombontsoa, mba saika tapitrisa euros. Ny hoavin'ny orinasa Bernard Tapie, izay miankina amin'ny hamaly, koa mihantona eo amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ara-barotra ao Paris.
Ny fakàna am-bavany, dia hatao ny alatsinainy maraina, dia efa niresaka momba ny dimy ambin'ny folo volana aprily.
Ny Fanjakana sy ny Hametrahana ny fanatanterahana (CDR), ny tena tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny lafy ratsiny teo aloha bahoaka banky, na ny sivily ny antoko amin'ny fitsarana, mitaky tsirairay avy ny tapitrisa sy, euros noho ny fitondran-tena ratsy ny mpiasa ny olona raharaham-barotra.
Direksiona misahana ny raharaham-panjakana Raharaham-bahiny - Fikambanana Islamika momba ny Fampianarana, ny Siansa ary ny Kolontsaina - ISESCO
Adierazpena Eskubideak Gizakiaren eta Herritarraren an - konstituzio Kontseiluak